के आफ्नो फोटो भएको केक काटेर खाँदा आफैं काटेर खाएको हुन्छ त ? - Ujyaalo Nepal
By ujyaalo	 Last updated Feb 24, 2020 132
दीपेश पुन ।
केक त जसको जन्म दिन हो उसैको फोटो राख्ने चलन पनि छ । के आफ्नो फोटो भएको केक काटेर खाँदा आफैं काटेर खाएको हुन्छ त ? हरेकले आफ्नो जन्मदिनको केकमा आफ्नो नाम लेखिन्छ । के आफ्नो नाम आफैं कसैले काट्न सक्छ त ? आफूलाई मन पर्ने मान्छेको फोटो, नाम वा उस्तो पहिचान झल्काउने चिजहरु जन्म दिनको केकमा राखेर केक काट्ने प्रचलन छ ।
आफूलाई मन पर्ने चिज पो केकमा बनाउने हो त । यो पनि केक नै हो । कार्ल माक्र्स , रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र नरेन्द्र मोदीको जन्म दिनको केक । विश्वका धेरै नेताहरुको केक त्यही देशको झण्डा, नक्सा अनुसार बनाईने कुरा नौलो हैन ।
केक घोडाको हुन्छ, हिमालको हुन्छ, आफ्नै फोटोको पनि हुन्छ,पृथ्वी आकारको केक पनि हुन्छ । केक अनेकथरीको बनाउन सकिन्छ । आफूलाई मन पर्ने वस्तुको आकार दिने मात्र हो ।
प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०७६, सोमबार ०४:०१
अयोध्या भारतमा नभै नेपालमा पर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ सम्वेदनशील हो
रामकथाको ओली काण्ड
सरकार ! पीडा, दुःख व्यक्त होइन, हुकूम बक्स्योस् ।
हेल्लो, यूवा नेता तथा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई,के लाग्छ तपाईंलाई ?जनता कराउँछन्…